အမေစု နဲ့ လုံမလေး (အကြွားပို့စ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
2010/2012/2015 Election » အမေစု နဲ့ လုံမလေး (အကြွားပို့စ်)	22
အမေစု နဲ့ လုံမလေး (အကြွားပို့စ်)
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Sep 23, 2015 in 2010/2012/2015 Election, Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 22 comments
ဘဝရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အမှတ်တရလေးမို့ ရွာထဲမှာ လာကြွားရင်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
(မပျက်စေနဲ့နော် သဂျီး… ပျက်ရင် ပြန်လျော်ရမယ်.. ဟွန်း)
ရင်တွေခုန်လွန်းလို့ ဘယ်လိုနေရမှန်းတောင် မသိဘူး…
Our Family is for NLD!
လုံမလေးမွန်မွန် says: https://www.youtube.com/watch?v=nTb951gI3Z4&feature=youtu.be
ပို့စ်ထဲမှာ မပေါ်ဘူးလား မသိဘူး..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပို့(စ) ထဲမှာ ပေါ်တယ်။
အမွန့် မက်နှာမြန်း ဖြီးလို့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟီး.. သွားပဲ မြင်ရတယ်ဟုတ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ၀ှီးချဲစီးပီးတိုင်းခန်းလှည့်တာ မြင်ချင်လား ဟင်င်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဘိုပဲဖြစ်ဖြစ်… သမ္မတဖြစ်ရင် ပြီးရော .. အမေလို သူတော်ကောင်းက အသက်ရှည်ဦးမှာ…
Ma Ma says: ကြွားပါ ကြွားပါ။
ဒါမျိုးအကြွားခံချင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟီး.. ပျော်လွန်းလို့ တွေ့သမျှလူ ပြောပြီး ကြွားမိနေတော့တာပဲ..
kai says: ပန်းကုံးတာင် …နှလုံးပုံလေးလုပ်ပြီးမှ.. စွပ်တယ်ပေါ့…။
အဲလိုလား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်ပါ့.. ဟုတ်ပါ့.. ပုံမှာရေးထားတဲ့စာတွေက တကယ်ပြောခဲ့တာ..
မြစပဲရိုး says: လုံမ (အကျယ်ကြီးအော်လိုက်သည်) :-)))
ရွာထဲ မှာ ဂုဏ်ယူစရာတိုးပြန်ပါပေါ့။
ချစ်သောလုံမ နဲ့ ချစ်သော ကိုယ်တို့ရဲ့ ဘုရင်မ ပုံကို သမိုင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါ သူကြီးရာ။
အဲဒီအမျိုးသမီးကြီး ကို အပြင်မှာ တွေ့ပြီး တစ်ခါလောက် ဖက်ထားလိုက်ချင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅နှစ် အချိန်တွေကို နှမြောမိ ပေမဲ့ အခု အချိန်လေး အနည်းငယ်ကျန်နေသေးရဲ့။
နောက် ၂၅နှစ် ဆို ရွှေပြည်ကြီး ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ ဆိုတာ မှန်းမရလောက်အောင် ဝေဝါးနေဆဲ။
မတရားမှုတွေ ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နေပါရက်နဲ့ ဒီမတရားမှု တွေ ကို ဖယ်လိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးနေတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးကြီး ကို အမြင်မကြည်သူတွေဟာ မတရားမှု ကို နှစ်သက်တတ်သူဘဲ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီလို လူတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို စစ်တမ်း ကောက်ပြီး အဲဒီ hypothesis မှန်/မမှန် study လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဝိုင်းရံ ပံ့ပိုးပေးနေသူ ဟာ ပညာမတတ်၊ အလုပ်လက်မဲ့၊ ကလေကချေ၊ အသိဉာဏ်တုံး တွေ လို့ ဆိုနေသူရှိလို့ပါ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဝိုင်းရံ ပံ့ပိုးပေးနေသူ ကျွန်မ တို့ရဲ့ သမိုင်း နောက်ကြောင်း ကို ကြိုက်သလို စုံစမ်းကြည့် ကြပါ လို့စ်။
ဘယ်လောက် တုံးကြ တယ် ဆိုတာသိရအောင်ပါ။
အဲဒါကိုလဲ ရွာထဲ မှာတင် List လုပ်ကြည့်ရမလား။ :-))))
လုံမလေးမွန်မွန် says: သမီးလေ.. အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ သတိမေ့သွားသလို ခံစားလိုက်ရတာ… ပန်းကုံးကို ဘယ်လိုစွပ်ပေးလိုက်မှန်း လုံးဝ မမှတ်မိဘူး… ရင်တစ်ခုလုံးလည်း ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ… ပြေးဖက်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ်.. ကိုလင်းလင်းကြီးကိုလည်း ကြောက်တာကိုး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မိန့်ခွန်း Link လေး အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ လုံမရေ။
ပြည်သူတွေက ကျွန်မတို့ ကို မကြိုက်လို့ လက်မခံဘူး ဆိုရင်လဲ လက်မခံတဲ့ အတိုင်း ပြည်သူ တွေရဲ့ ဆန္ဒ ကို လေးစားရမှာဘဲ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – ၂၃-၀၉-၁၅ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောပွဲ)
ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်သူလူထုက အများကြီးသတိထားရပါမယ်။
ပဋိပက္ခ ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာလား။ ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာ မတည်ငြိမ်အောင် လုပ်နေတာလား၊
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒေါသကို ချုပ်တည်းပါ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – ၂၃-၀၉-၁၅ ဒေးဒရဲမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောပွဲ)
Mike says: .အားကျပါတယ်မွန်မွန်ရယ်
.ဒေါ်စုကို လှိုင်မြှိုနယ်ရုံးလာဖွင့်တုန်းက ခပ်လှမ်းလှမ်းကမြင်ဖူးခဲ့တယ်…လမင်းကြီးလိုလင်းလို့ .ပုံတွေကသေးတာဟယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီပုံတွေတောင် သူများက ပို့ပေးလို့ ရတာ အူးမိုက်ရေ… ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းဖို့လည်း သတိမရဘူး.. အရှိန်အဝါက သိပ်ကြီးတာ.. ရောက်လာတာနဲ့ လင်းကနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ… မျက်နှာကို စေ့စေ့မကြည့်ရဲဘူး.. အဲဒီလောက်အထိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: အမေ့ကို နီးနီးကပ်ကပ်တွေ့ပြီး စကားပြောချင်လိုက်တာာာာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးဟ…. ကိုယ်တိုင် အမတ်လောင်းဖြစ်မှ ရမယ်ထင်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: လုံမလေး၊ချစ်စရာ
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြန်သွားရတာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးပဲ… တကယ့်အမှတ်တရပါပဲ အန်တီအေးရေ…
တောတွင်းပျော် says: လုံမလေးရဲ့အပျော်က ဒီဖက်အထိကိုတောင်
ဦးကြောင်ကြီး says: အမွမ်ကို ဒေးဒျဲတောမြို့ တခုလုံးက သိသွားမှာဘဲနော်…
Ma Ei says: အမေစုကို ပန်းကုံးစွပ်ပေးနေတာ ဒို့ရွာသူလေးပေါ့လို့
အောင် မိုးသူ says: ငါလည်း အဲ့လို ပန်းကုံးပေးချင်ထှာ